I-LIVE EDGE WOOD COUNTERTOPS (ISIKHOKELO SOYILO) - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi I-Live Edge Wood Countertops (Isikhokelo soYilo)
I-Live Edge Wood Countertops (Isikhokelo soYilo)
Igalari yee-countertops zeenkuni ezijikelezayo ezibandakanya izitayela zokugqiba, iindleko kunye nemibuzo ethandwayo.
Yintoni i-countertop ye-edge edge? Umda ophilayo womthi licala lomthi lomthi. Olu luhlobo oluhlaza, olujongeka ngokwendalo emthini apho uya khona ungasikwa kwaye uneemilo eziphilayo. Ixolo lisuswa emithini ukuze lenze uyilo lwendalo olunemiphetho egudileyo ngelixa ugcina amagophe endalo asesona sibheno siphambili kumanqwanqwa aphilileyo. Ukushiya imingxunya yendalo kunye nokuqhekeka kwisiqwenga somthi kunye nemiphetho ephilayo kukunceda wenze ukubonakala kwendalo okuninzi kunokwenzeka.
Uhlala njani emaphethelweni omthi?
Uwugqiba njani umthi ophilileyo?
Ixabisa malini imiphezulu yeetafile yomda ophilayo?
Kutheni le nto ukuhlala emaphethelweni eenkuni kubiza kangaka?
Ngaba ndifanele ndisuse i-bark kwi-live edge?
Ngokuqhelekileyo naluphi na uhlobo lweenkuni lungasetyenziselwa ukuhlala kumacwecwe e-slab. Nangona kunjalo, ezimbalwa zeentlobo ezilungileyo kakhulu ziqhelekileyo ezisetyenziselwa ukubala iibhloko zokubala. Ezi ziintlobo zeenkuni ezifana ne-tigerwood, elm, maple, hickory, cherry, beech kunye ne-walnut. Bona Okuninzi imiphezulu yeetafile Anut ikhitshi Apha.
Ukwenza imiphezulu yeetafile yeplanga elisecaleni kufuneka uqale ngesiqwenga esikhulu somthi owomileyo, kubalulekile ukuba oku kome, kungenjalo kuya kuguquka kwaye kujike ngelixa ulinde ukomiswa. Ngomthi eminye imiphetho ifuna ukunqunyulwa ukwenza i-slab. Nokuba yeyiphi na imiphetho efuna ukuba ngumda odlalayo kufuneka ishiywe iluhlaza, ayinakusikwa ngesarha. Ukuba awufuni ukusika i-slab ngokwakho, zikhona iindawo onokuzithenga zisanda kusongwa okanye zibuyiswe kwakhona ii-slabs eziphelileyo ezivela kwiivenkile zalapha. Oku kuhlala kugqityiwe.
Ukugqiba umda ophilileyo weenkuni kufuneka uqale ngokuqala nge-slab cut to the size you wish. Sebenzisa i-epoxy ecacileyo kuqhelekile ukugcwalisa imingxunya kunye nokuqhekeka kweenkuni, ngelixa ugcina ubukhethekileyo kwisiqwenga somthi.
Qiniseka ukuba ucoce nakuphi na ukungcola okanye inkunkuma evela emthini ngaphambi kokuba uqale ukugqiba iinkuni, kungenjalo inokuxubana ne-epoxy kwaye kujongeka ngathi iyadada. Qala ngokuzalisa ii-wholes okanye nayiphi na indawo enendawo kunye nokuqhekeka, ezi ndawo kufuneka zenziwe kuqala njengoko zifuna i-epoxy engaphezulu kwaye emva koko ungaqhubeka nomhlaba omcaba. Ikhitshi elinomphezulu womthi wepoplar countertop.
Nje ukuba loo nto yome kwaye ibe yindawo elukhuni, yisanti phantsi njalo ke nangobunye bomhlaba. Ngaphezulu kobuso bonke kufuneka ufake i-polyurethane, i-lacquer okanye i-shellac emthini ukuze ugqibe umnqweno wokugqibela. Olu luyilo lubonisa ifayile ye- Ikhitshi elinesiqithi esikhululwe ngamaplanga ngekhawuntari yomda ophilayo.
Itafile yeplanga yomthi esezantsi iyahluka ngokwexabiso ngokobungakanani, imilo, uhlobo lwenkuni, njl njl. Uqikelelo oluqhelekileyo nangona kunjalo luyi- $ 20 ngenyawo yebhodi. I-slab esezingeni eliphakathi inokuba malunga neenyawo zeebhodi ezingama-30, ezinokuthi ziye kuthi ga kwi-600 yeedola kwisilayidi esinye somthi. Oku kubalulekile ukuba kuthathelwe ingqalelo xa uyila isantya esinee-slabs ezininzi, njengoko unokukhetha kuphela abathile ukuba babe nomda ophilayo. Okanye mhlawumbi ufuna yonke into eluhlobo olufanayo!
Unyawo olunye lwebhodi lulinganiswa njenge-1 square foot nge-1 intshi ubukhulu. Oku kunzima xa ubude kunye nobubanzi buguqulwe kancinci kunye neemilo eziphilayo zemiphetho ephilayo. Njengokuqikelelwa ngokubanzi (okunokwahluka ngevenkile kunye nomthengisi) unokucinga ukuba ixabiso liyakulinganiswa ngobude (ngeenyawo) ububanzi bamaxesha (ngeenyawo) ukuphindaphinda kwamaxesha (nge-intshi) eli nani liza kuba ziinyawo zebhodi, kunye namaxesha elo nani ngenani lamaqhekeza lixabisa ngenyawo ngalinye lebhodi.
Imiphetho yeenkuni eziphilayo zikwicala eliphezulu loluhlu lwamaxabiso, njengoko kuchaziwe apha ngasentla. Eli xabiso liqhutywe yimibandela embalwa.
Okokuqala, njengoko kuchaziwe kuyo yonke le nkqubo, imiphetho yeplanga ephilayo yahluke kakhulu, bathatha izinto zendalo kwaye bazigcine ukuze babenakho ukufuduswa emakhayeni ethu njengefanitshala kunye ne-casework. Oku kufuna ingqalelo kwiinkcukacha kunye nomnwe womntu. Izinto ezenziwe zingahlanza itoni yezinto ngexesha elifutshane, kodwa ukuze ufumane iimpawu ezinqwenelekayo kumthi ophilileyo weenkuni, kuya kufuneka uthathe ixesha lakho uqiniseke ukuba zilungile. Olu hlobo lomsebenzi lufuna umsebenzi owongezelelweyo obeka amaxabiso phezulu. Oko kuyathethwa ngokuqinisekileyo kufanelekile ekuhambeni kwexesha.
Okwesibini, imiphetho ephilayo yomthi ikwimfuno ephezulu! Kwingcinga yokubonelela kunye nemfuno, xa ibango liphezulu kwaye unikezelo luphantsi, ixabiso liya kunyuka. Kungenxa yokuba abantu baya kuyibhatala, okanye bayilinde, ngoko ke iinkampani azihlali kwimveliso eninzi ngexesha, ukuba ikhona into abazabalazayo ukugcina iiodolo zemveliso.
Ewe! Susa i-bark kumthi ophilileyo. Ukushiya i-bark kuthanda ukudala iingxaki ngakumbi kunokuba kufanelekile. I-bark iyawa, kwaye ngelixa ijongeka ipholile kwaye iyindalo, umda ongezantsi kulula kakhulu ukusebenza nayo, kwaye usemhle. Ngeendawo zokuphamba ezenziwe ngamaplanga ezishenxisiweyo amaxolo asuswe umntu angayixabisa inkangeleko yendalo yokutya okuziinkozo kwendalo.
Ukuba ufuna ukugcina i-bark iqhotyoshelwe kwi imiphezulu yeetafile iinkuni , zikhona iindlela zokwenza ukuba kwenzeke ngokunjalo. Kukho izinto zokuyigcina endaweni, kunye namatywina anokusetyenziswa.
izipho zokuzalwa zothando zomyeni
Ngubani oza kumema kwiqela le-bachelor
Usapho lomtshakazi luhlala kweliphi icala
ibrashi yomoya eyiyo yenza ikhithi
ulinde ixesha elingakanani ukutshata
kude kube nini